अभि सुवेदीको स्वरमा धर्मराजका गीत - म्यागेजिन - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अभि सुवेदीको स्वरमा धर्मराजका गीत
सङ्गीत श्रोता काठमाडौं, ४ साउन
अभि सुवेदीलाई कुनै एकै पदले परिचय दिन सजिलो छैन। उनी गन्यमान्य प्राध्यापक हुन्। ख्याती कमाएका समालोचक हुन्। जसरी साहित्य क्षेत्रमा उनको प्रतिष्ठित नाम छ, त्यसरी नै रङ्गकर्ममा पनि उनको स्थान प्रभावी छ। तर, धेरै कमलाई थाहा छ– उनी सङ्गीत जगतका पनि एकजना ‘स्वीट–हार्ट’ हुन्।
धेरैअघि सङ्गीतकार अम्बर गुरुङले उनलाई भनेका रहेछन्– ‘अभि भाइ, तपाईं सङ्गीतको समीक्षक मात्रै होइन, सङ्गीतकार नै हो।’
‘म कसरी सङ्गीतकार, अम्बर दाजु?’ उनले सोधे।
‘सङ्गीतकार भनेको बाजा बजाउने वा धुन बनाउने मान्छे मात्रै होइन, सङ्गीतमा गम्भीर चिन्तन गर्ने मान्छे पनि सङ्गीतकारै हो । तपाईंले सङ्गीतमा जसरी लेख्नुभएको छ, त्यो एउटा सङ्गीतकारले मात्रै लेख्न सक्छ।’
सङ्गीतबारे अभिसरले थुप्रै चिन्तन–मनन गरेका छन् । बोलेका छन्, लेखेका छन् । सार्वजनिक मञ्चहरुमा विचार राखेका छन् । तर धेरैलाई थाहा छैन– अभिसर गीत पनि निकै मीठो स्वरमा गाउँछन् (हेर्नुहोस् भिडियो) ।
‘म त एकान्तमा गीत गाउने मान्छे हुँ,’ भन्छन्, ‘जब दिक्क लाग्छ, अनि गाउँछु। गीत गाएपछि भने मन भरिएर आउँछ।’
नेपाली लोक, आधुनिक, शास्त्रीय र पाश्चात्य शैलीका गीत उनी रुचिपूर्वक सुन्छन्।
मनदेखि रुचाएर सबैभन्दा धेरै चाहिँ उनले धर्मराज थापाका लोकभाका गाए।
बाल्यकालमा कम्युनिस्ट अभियानका गीत गाउँदै सभाहरुमा हिंडेका अभि सुवेदीले नेपाली सङ्गीतको मूलधारका ठूल्ठूला नामसँग सङ्गत गर्ने मौका पाए । गोपाल योन्जन, अम्बर गुरुङ, नारायणगोपालसँग उनको भेटघाट भइरहन्थ्यो। नारायणगोपालले त उनलाई गीत रेकर्ड गर्न आग्रह नै गरेका रहेछन्।
‘तर, म लजालु थिएँ, रेकर्डमा गाइनँ,’ भन्छन्, ‘अहिले पनि सलिल (छोरा)हरु गीत रेकर्ड गराउनुपर्यो भन्छन्, म भाग्दै हिंडेको छु । एकान्तमै गाउन मलाई मजा आउँछ।’
प्रकाशित ४ साउन २०७३, मंगलबार | 2016-07-19 13:57:16
सङ्गीत श्रोता नेपालखबर डेस्क सम्पादक हुन्
सङ्गीत श्रोताबाट थप
क्रान्तिका तीन उद्गम–थलोमा चुनावी दौड
हाइ-स्पिड चुनावी अभियानमा प्रचण्ड
नागरिकले खुसी साटेको दिन
ओबरमा चीनसँग सम्झौता गर्न महरा बेइजिङ जाने
प्रेममा एसिडको पिचकारी
‘दश मिटर अग्लो’ राष्ट्रवाद!
‘९७ सालमा हाम्रो छुट्टै राष्ट्रिय गान थियो’
कहाँ छ सम्राट अशोकले ‘कर छुट’ गरेको लुम्बिनी गाउँ?
पृथ्वीनारायणबारे प्रचण्ड पहिले के भन्थे?
गाउँपालिका र नगरपालिकाः कस्ता-कस्ता छन् नयाँ नाम?
त्यतिखेर स्कुलको युनिफर्म थिएन। सुरुमा बन्दीपुरबाट आउँदा मैले कमिज र पाइजामा लगाएको थिएँ। काठमाडौँ आएपछि मात्रै पाइन्ट सिलाएर लगाइयो। सुतीको कमिज...
चीनमा जब भिक्षुहरू पनि ब्यापारतिर लागे
सन् १९८९ मा शाओलिन भिक्षुहरूले मार्सल ग्रुप स्थापना गरेदेखि उनीहरू अनेकानेक देश र क्षेत्रतर्फ उडिरहेका देखिन्छन्। त्यो उडानको लक्ष्य हो, मार्सल...
उच्च टिमको ढोकामा गाउँले क्रिकेटर
यसअघि पटक–पटक बन्द प्रशिक्षणमा परेपनि टिममा ब्याट्स म्यान धेरै हुँदा उनी सूचीमा अटाउन सकेका थिएनन्। घरेलु प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका...